Israel oo ku tilmaamtay heshiiska Fatax & Xamaas mid u hiilanaya argagaxisada – SBC
Israel oo ku tilmaamtay heshiiska Fatax & Xamaas mid u hiilanaya argagaxisada
Tel Aviv:- Kadib markii ay soo baxeen wararka ku aadan in labada dhinac ee isku haya maamulka filistiin xamaas iyo Fatax ayaa waxaa haddana dhanka kale soo baxaya aragtida beesha caalamka ay ka qabaan heshiiskaan ay kala saxiixdeen filistiiniyiinta.
Ra’iisal wasaaraha xukuumadda Yuhuuda oo hadda booqasho rasmi ah ku maraya magaalada London ee carriga Britain ayaa ku tilmaamay heshiiskaas in uu yahay mid mideenaya kooxo argagaxisa ah islamrkaana Isra’el ay qaadi doonto talaabada ku haboon.
Sidoo kale xukuumada Yuhuuda ayaa joojisay lacagaha canshuuraha ee ay kasoo ururin jirtay meelaha ay heysato ee dhulalka Falastiin oo ay siin jirtya xukuumadda falastiin kadib heshiiskii ay wada gaareen dhaqdhaqaqa Xamas iyo fatax.
Waziirka maaliyadda Isra’el ayaa sheegay in lacagahaasi aysan u gudbin doonin xukuumadda Faltiin si aysan gacanta ugu galin dhaqdhaqaaqa Xamas.
Dhanka kale Xukuumadda Falastiin ayaa ka dalbatay beesha caalamka in ay wax ka qabato lacagta ay goosatay Isra’el oo ay ku sheegtay in 70% ay tahay waxyabaha ay ku tiirsan tahay maamulka Falastiin.
WASKH ISRAEL DAGAAL BAA INOO DHEXA,,,,,,,,,WAXAN KA CODSANAYAA QOF WALBA OO ISLAAMA INUU MEEL UGA SOO JEESTO LA DAGAALLANKA YUHUUDA